'Waa Macquul In Kane Uu Dheelo Kulanka Chelsea' - Pochettino %
‘Waa Macquul In Kane Uu Dheelo Kulanka Chelsea’ – Pochettino
EnglandLatest Sports News
By Laacib News	 On Mar 29, 2018
Mauricio Pochettino, tababaraha naadiga Tottenham ee wadanka Ingiriiska ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay inay macquul tahay inuu Harry Kane kasoo muuqdo kulanka ay Wamblay kula dheeli doonan Chelsea isbuuca soo aadan.
Kane ayaa waxaa uu dhaawac looga saaray kulan ay naadigiisa dheeshay labo todobaad ka hor, isagoona la filayo inuu dib usoo laabto bisha soo aadan ee April, xili uu maray tijaabooyin caafimaad oo dhanka Muruqa ah.
“Waxaan ubaahan nahay inaan diyaar isano isaga – wax walba waa kuwa wanaagsan, waxaana uu sameynayaa waxyaabo wanaagsan, maalin walbana horumar ayuu sameynayaa,” ayuu Mauricio Pochettino, usheegay maanta oo Khamiis ah warbaahinta.
“Wali kulan waxaa ka harsan maalmo, waaan ubaahan nahay inaan diyaar ka dhigno isaga – waxaan rumeysanahay inay adag tahay inaan Haa ama Maya aan dhaho ka hor kulanka,” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay hadii uu kusoo bilaaban doono.
“Sidaas darteedka, midkoodna kuma dhahayo waa uu dheelayaa ama ma dheelayaa, Haa ama Maya,” ayuu sii daba dhigay, ninkaan udhashay wadanka Argentina, islamarkaana horey usoo hogaamiyay kooxda kubada Espanyol ee wadanka Spain.
“Inuu soo kaban doono, isbuucaan bilowgiisa ama kan kale dhamaadkiisa, kuuma sheegi karo, laakiin waxa muhiimka ah waxa weyaan inaan mar walba ahaano kuwa wanaaga ka eegaya soo kabashadiisa,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Mauricio Pochettino.
KanePremier LeagueTottenham vs Chelsea
Ian Rush Oo Shaaciyay Midka Ka Muhiimsan Saalax & Firmino
Daafaca Real Ee Achraf Hakimi U Goodiyay Xulka Spain
Prev	Next 1 of 3,516